उत्तर कोरियाली नेता किम एक्कासी चीन भ्रमणमा किन ? | suryakhabar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर कोरियाली नेता किम एक्कासी चीन भ्रमणमा किन ?
उत्तर कोरियाली नेता किम एक्कासी चीन भ्रमणमा किन ?
on: ५ असार २०७५, मंगलवार १३:१६ In: अन्तर्राष्ट्रियTags: उत्तर कोरियाली नेता किम एक्कासी चीन भ्रमणमा किन ?No Comments
बेइजिङ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन मङ्गलबार चीन जान लागेका समाचार छ । उनी दुई दिने भ्रमणका लागि मङ्गलबार बेइजिङ जान लागेका हुन् । सो कुराको जानकारी राजधानी बेइजिङबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले दिएका छन् । तर उनी बुधबार मात्र राजधानी बेइजिङ पुग्ने समाचार चिनियाँ टेलिभिजन सिसिटिभीले दिएको छ ।
नेता किमले यही जुन १२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग सिङ्गापुरमा ऐतिहासिक शिखर वार्ता सम्पन्न गरेका थिए । उक्त वार्ताको एक हप्तापछि किम चीन भ्रमणमा निस्कन लागेको बताइएको छ ।
उनी मङ्गलबार चीन पुगे भने गएको मार्च महिनादेखि नै यो तेस्रो पटकको चीन भ्रमण हुने छ । उनी जुन १२ को शिखर वार्ताको केही दिनमात्र अघि पनि चीन पुगेका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग उनले ग्रेट हल अफ पिपुल्समा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
चीन उत्तर कोरियाको सहयोगी राष्ट्र हो । चीन उत्तर कोरियाको एकमात्र आर्थिक साझेदार राष्ट्र पनि हो । बेइजिङले यसअघि नै अमेरिकालाई उत्तर कोरियाविरुद्धको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न सुझाव दिइसकेको छ ।
गत मार्च यताको किमको यो तेस्रो पटकको चीन भ्रमण हो । चीनसँगको निकटताको कारण पनि उत्तर कोरियाली नेताको चीन भ्रमणलाई एक महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा लिइएको छ ।
सैन्य अभ्यास स्थगित
यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार अमेरिका र दक्षिण कोरियाले अर्को महिना गर्ने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
उनीहरुले उक्त सैन्य अभ्यास स्थगित गरेको पुष्टि पनि गरेका छन् । सिङ्गापुर वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिण कोरियासँगको सैन्य अभ्यास रोक्ने बाचा उत्तर कोरियाली नेतासँग गरेका थिए ।
Tags: उत्तर कोरियाली नेता किम एक्कासी चीन भ्रमणमा किन ?
चरीकोटमा ४७ जनाले गरे रक्तदान
बेसिन्दा पहिराबाट १०४ घर विस्थापित
५ असार २०७५, मंगलवार १३:१६